टूथब्रश टाउकोको कडा र नरम ब्रस्टलहरू बीच भिन्नता
कडा टुथब्रसको साथ तुलना गर्दा, नरम ब्रस्टल टुथब्रस दाँतहरूको लागि कम हानिकारक हुन्छन् र धेरै उपभोक्ताहरूको पक्षमा विजयी भएका छन्। नरम र कडा टुथब्रस र कसरी सफ्ट टूथब्रश प्रयोग गर्ने बिचको भिन्नतालाई नियालेर हेरौं। एक सफ्ट टुथब्रश बिच के भिन्नता छ ...
धेरै आमाबाबुले बाल्यकालदेखि नै उनीहरूको दाँत माझ्ने बानी विकास गर्नेछन्, त्यसोभए बच्चाहरूले दाँत कता राम्रो दाँज्नु पर्छ कि? म कस्तो प्रकारको टूथब्रश रोज्नु पर्छ? बच्चाहरूको टूथब्रश छनौट गर्दा के सावधानहरू हुन्छन्? आउनुहोस् आज साझा गरौं: कसरी छनौट गर्ने ...
टूथब्रश कसरी छनौट गर्ने
सबैभन्दा पहिले, माउथवाश कप खरीद गर्दा, तपाईंले टुथब्रशको विस्तृत कार्यात्मक डिजाइनमा ध्यान दिन आवश्यक छ, जुन निम्न तीन चरणहरूमा वर्णन गरिएको छ। सर्वप्रथम, हामीले टुथब्रशको डिजाईन आकारमा ध्यान दिन जरुरी छ, जस्तै तरंग आकारको डिजाइन, जुन मौखिक सीए फिट हुन्छ ...